Borussia Dortmund Oo Xasuuq Ku Bilowday Horyaalka Bundesliga, Erling Haaland Oo Mucjisooyinkiisa Sii Wata Iyo Natiijooyinka Kulamadii Maanta - Gool24.Net
Borussia Dortmund Oo Xasuuq Ku Bilowday Horyaalka Bundesliga, Erling Haaland Oo Mucjisooyinkiisa Sii Wata Iyo Natiijooyinka Kulamadii Maanta
Kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa xasuuq u geysatay naadiga ay deriska yihiin ee xafiiltanka weyn ka dhexeeyo ee Schalke 04 oo ay isku haleeleen kulankooda ugu horreeya horyaalka waddanka Jarmalka ee Bundesliga ee maanta dib usoo laabtay.
Dortmund ayaa awood ku jiidhay Schalke, waxaanay ku burburisay 4-0 uu gool dhalinta u bilaabay mucjisada da’da yar ee Erling Haaland oo saxeexay goolkii ugu horreeyey maalinta ugu horreysa ee dib loogu soo laabtay ciyaaraha.
19 jirkan oo dunidu hore ula yaabanayd wacdaraha uu dhigayay ayaa shabaqa soo taabtay daqiiqaddii 29aad markii kubbad uu garabka midig uga soo dhiibay Thorgan Hazard uu lugta bidix ugu leexiyey goolka, sidaana ugu damaashaaday goolka koowaad, waxaanu goolkaasi noqday kiisii 13aad ee uu u dhaliyey kooxda reer Germany 12 ciyaarood oo uu u saftay.
Ciyaartan oo ahayd kulanka loo yaqaano Revierderby oo calaamad u ah xafiiltanka labada kooxood iyo derisnimadooda ayaa waxay ka dhacday garoonka Signal Iduna Park ee Borussia Dortmund oo madhan, kaas oo ay xiddigaha kooxda martida loo ahaa ku muujiyeen dabbaal-deg ay dhamaadkii kasoo qaadayaan sidii ay jamaahiirtoodu la joogaan.
Daqiiqaddii ugu dambaysay qaybta hore ayuu Raphael Guerreiro natiijada ciyaarta ka dhigay 2-0, kaddib markii uu laacibka caawinta ee kulankan ee Julian Brandt uu ka helay baas qurux badan, waxaana labada kooxood ku kala nasteen 2-0.
Markii la isugu soo noqday qaybta labaad ee ay maraysay daqiiqaddii 48aad ayuu kubbad-caawiyaha goolka hore ee Thorgan Hazard uu shabaqa dhex-dhigay kubbad uu uga timid Julian Brandt, waxaana midka afraad ugu daray Raphael Guerreiro.
Markii ay ciyaartu dhamaatay ayaa waxay ciyaartoyda Borussia Dortmund sameeyeen dabbaal-deg cajiib ah oo garoon madhan ay ugu dabbaal-dageen sidii mid buuxa oo ay taageereyaashu joogaan, waxaana iyagoo aan isku dhowaanin ay meteleen inay gacmaha is-haystaan oo ay dhinaca jamaahiirtu fadhiistaan u yaaceen.
Erling Haaland ayaa baraha bulshada qabsaday markii uu goolka dhaliyey, waxaana lagu amaanay sida uu u ilaaliyey sharciga kala-fogaanshaha ee xakamaynta fayraska Korona, isaga oo aan usoo dhowaanin ciyaartoyga kale, isla markaana sameeyey qoob ka ciyaar kalidii ah.
Guushan waxay siisay Borussia Dortmund inay kusoo dhowaato Bayern Munich oo ay hal dhibic oo kaliya usoo jirsato, waxaanay yeelatay 54 dhibcood halka Munich oo berri ciyaaraysa ay ka leedahay 55 dhibcood.
Natiijooyinka kulamadii kale ee maanta dhacay:
Augusburg 1-2 Wolfsburg
Fortuna Düsseldorf 0 – 0 SC Paderborn 07